"NEFA NY ALAHELONAREO HODY FIFALIANA!"
Ry havana malala, nahavita ny iraka nanirahana Azy tety an-tany i Jesoa. Efa vita ny famonjena ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Isan'izany ianao izay mandre izao toriteny izao. Teo ambony hazo fijaliana no nilazany hoe: VITA ( Jao 19:30). Noho izany, AOKA HIFALY IZAY MANAIKY SY MINO AN'I JESOA HO TOMPO SY MPAMONJY AZY, satria:
I HIFANKAHITA MIVANTANA IANAO SY JESOA!
Izany no fampaherezana lehibe natolotr'i Jesoa ny mpianatra mialoha ny hisarahany amin'izy ireo ka hiakarany ho any an-danitra. Taorian'ny fahoriana sy ady mafy natrehan'i Jesoa dia sahiran-tsaina ireo mpianany satria Ilay noheveriny ho mpampianatra lehibe sy mpitarika azy no nampijaliana sy novonoina. Taty aoriana anefa, rehefa nitsangana tamin'ny maty i Jesoa, nijoro teo anivon'izy ireo satria nandresy ny fahafatesana, dia niverina indray ny fifalian'ny mpianatra. Kanjo, handeha indray i Jesoa ka ny mpianatra sisa no ho eo. Koa dia teraka indray ny tahotra sy ny ahiahy. Hoy indrindra i Jesoa mampahery sady mampionona azy ireo: " 20 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly; ary ianareo halahelo, nefa ny alahelonareo hody fifaliana. 22 Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny; fa hahita anareo indray Aho."
Ry havana malala, mandalo sy miserana ihany ny fijaliana sy fanenjehana sy izay tsy rariny izay iaretanao eto an-tany satria ianao kristianina. Ny fijoroana amin'ny fahamarinana matetika dia toa ahazoana fatiantoka, fa ny manao kolikoly sy ny tia kely sy ireo mahitahita kosa toa tafita sy mahazo fahombiazana. Ny mpanao Salamo aza milaza hoe: "saiky nibolisatra ny tongotro; saiky solafaka ny diako, ... raha nahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy." (Sal 73:1-5). Tano mafy ny famonjena efa anananao, ry kristianina, satria ny alahelonao hody fifaliana. Azo antoka fa hifankahita mivantana amin'i Jesoa, Ilay tianao sy Tia anao ianao.
II HO FALY TANTERAKA NY FONAO!
Tena faly ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty i Jesoa ka lasa niresaka sy nihaona tamin'izy ireo indray. Foana ny fahadisoam-panantenana sy izay fahaverezan-kevitra nahazo azy ireo. Kanefa toy ny soasoa voatapon-drano izany hafaliana izany ka tsy hita loatra ny tsirony fa nanjary natsatso rehefa fantatry ny mpianatra fa handeha indray io Jesoa io. Zava-dehibe loatra ny fifankahitana sy ny fiaraha-miaina amin'i Jesoa. Eo no ilazan'i Jesoa fa "ianareo dia manana alahelo ankehitriny; fa hahita anareo indray Aho, dia ho faly ny fonareo. Izany no midika fa tsy ho feno ny fifaliana raha lavitra an'i Jesoa. Ary i Jesoa mihitsy no loharanom-pifaliana ho an'ny kristianina. Koa izay tia sy mino an'i Jesoa Kristy dia miandrandra izany fahatanterahan'ny fifaliana eo anatrehan'i Jesoa izany. Ezaka very maina ny mikatsaka fifaliana ivelan'ny fanatrehan'i Jesoa. Ny fifaliana eto amin'izao tontolo izao dia ivelambelany, tsy maharitra, fahafinaretan'ny nofo mandalo, vahaolana kimaikamaika fotsiny, vao mainka aza mampiditra alahelo ho an'ny hafa.
Ry havana malala, izany indrindra no antony nanomezana ny Fanahy Masina ho an'ny mpino mba hananana fifaliana mitoetra sy velona ao anatiny ny kristianina amin'ny alalan'ny fiombonam-piainana amin'Andriamanitra mandritra ny androm-piainany. Koa mahereza ary fa vao mainka ho tonga lafatra ny fifalianao satria ho faly tanteraka ny fonao rehefa mahita an'i Kristy sy ny mpino namanao tafahoana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Foana hatreo ny fahoriana sy ny alahelo. Ry havana, efa tena azonao antoka tokoa ve fa isan'izay mino an'i Kristy ianao? Manao ahoana ny fahavononanao hihaona sy honina ao amin'ny Tomponao?
III FIFALIANA MANDRAKIZAY NO HIAINANAO!
Hoy i Jesoa: "Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny, fa hahita anareo indray Aho, dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo." Teny fampanantenana lehibe ho anao kristianina izany, ry havana, satria Tenin'Andriamanitra izay sady marina no azo antoka, azo itokiana sy ianteherana. Noho izany, aoka hotsaroantsika lalandava fa misy fetrany io fijaliana sy alahelo mahazo antsika ety an-tany io.
Koa tarihin'i Jesoa Kristy isika hitoetra ho mahatoky, tsy hivilivily na hanao fitan-droa rehefa tojo olana sy fahasahiranana, fa aoka tena hijery ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesoa Kristy, hihazona sy hiorina ao amin'ny finoana. Satria Izy rahateo efa nilaza fa: "Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia, Izaho efa naharesy izao tontolo izao." ( Jao 16:33), sy ny hoe: "indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao." ( Mat 28:20).
Ny fifaliana tena izy efa voaomana ho anao ao amin'ny Paradisan'i Ray dia harena tsy azon'iza n'iza halaina fa atolotr'Andriamanitra. Azonao atao ny miaina izany dieny ety an-tany ka hitaomanao ny manodidina anao hiombom-piainana amin'Andriamanitra, ary koa hampaherezanao ny hafa fa ny alahelony hody fifaliana satria "fantatsika fa raha ravana ny trano-laintsika ety an-tany, dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika, dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra" (II kor 5:1).
Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra! Amen!